Ipaki yeholide sinombuki zindwendwe onguColin And Violet
Ibekwe phezu kolwandle. Ukumkanikazi omnye kunye nabangatshatanga ababini. Iimpawu zokupholisa umoya; ikhitshi eligcweleyo elinefriji, i-convection microwave kunye nestovetop; Iveranda enebarbecue kunye nesidlo sangaphandle; igumbi lokuhlambela eligcweleyo; igumbi lokuphumla kunye negumbi lokutyela.
Setha phezulu kwinduli ethe cwaka enemibono etshayelayo, indawo yakho yokuhlala sisiseko esifanelekileyo sokufunda ngakumbi ngembali yemimandla etyebileyo kwaye ujonge kuNxweme lweVictoria's Discovery.
Eyaziwa njengendawo yokuzalwa yaseVictoria, idolophu yaselunxwemeni yasePortland izele yimbali etyebileyo kunye neendawo zokuloba ezimnandi. Gcwalisa iholide yakho ngokuthatha iindawo zembali zasekhaya, ujongane ne-Great South West Walk okanye uphumle ukutyelela elwandle ngeenyanga ezifudumeleyo, ukuloba elwandle olunzulu okanye uqhube uhambo lwethu losuku kunye ne-Great Ocean Road.
Umbuki zindwendwe ngu- Colin And Violet
Sifumaneka ngo-7:30am – 7:30pm, iintsuku ezisi-7 ngeveki, okanye ngo-8:00am – 6:30pm ukususela ngoJuni ukuya kuAgasti.
UColin And Violet yi-Superhost